'एउटा यस्तो प्रेम कहानी' नचलेपछि बिग्रिए सम्बन्धहरू ! :: Setopati
सेतोपाटी संवाददाता काठमाडौं, माघ ८
शक्ति श्रेष्ठ र कविता मानन्धरको डेब्यू फिल्म 'एउटा यस्तो प्रेम कहानी' सार्वजनिक भएको करिब एक साता भयो। तर अपेक्षा राखिए जति प्रतिफल यसले पाएन। फिल्म 'सुपर फ्लप' भयो।
फिल्मबारे समीक्षकहरूले विभिन्न तर्क राखे। कतिले फिल्ममा कुनै ठोस कथा नै नभएको समेत भने। फिल्म 'टु बी कन्टिन्युड...' भन्दै अनिश्चयमा सकिन्छ। तर यसले दर्शकलाई प्रतीक्षा र कौतुहलतामा बाँध्न असक्षम देखिन्छ।
फिल्मको गुणस्तर र विषयवस्तुबारे मात्र होइन, निर्माण टोलीसम्बन्धी पनि खासखुस चल्यो। यो खासखुस फिल्म निर्माता एवम् प्रस्तोता शिव श्रेष्ठले फिल्म सार्वजनिक गर्ने घोषणासँगै सुरू भएको हो। फिल्मको पोस्ट-प्रोडक्सनको काम नसकिकनै फिल्म सार्वजनिक मिति तोकेर शिव श्रेष्ठले हतारो गरेको भन्ने फिल्ममा अभिनित कलाकारले गुनासो पोखेका थिए।
फिल्मकी अभिनेत्री वर्षा राउतले आफूलाई फिल्म सार्वजनिक हुने मिति तय हुन्जेल समेत थाहा नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी थिइन्। उनी फिल्मको प्रचार-प्रसारमा पनि देखिइनन्। फिल्ममा आफ्नो डबिङ नै नभएको भन्ने उनको अर्को तर्क थियो। त्यसलाई हेरेर हामी बुझ्न सक्छौं, शिव श्रेष्ठ लगायत निर्माण टोलीले साँच्चै फिल्म सार्वजनिक गर्न हतार गरे।
वर्षाको मात्र होइन, फिल्ममा मिथिला शर्मा, प्रियंका कार्की, आयुष्मान देशराज जोशी लगायतको दृश्यमा अरू नै कोहीको आवाज भएको दर्शक एवम् समीक्षकको भनाइ छ।
फिल्मको प्रचारप्रसारमा वर्षासँगै, करिश्मा मानन्धर र मुख्य अभिनेत्री कविता मानन्धर पनि देखिएनन्। कविताको यो डेब्यू फिल्म भए पनि आफ्नी आमाको कुरा पछ्याउँदै उनी फिल्म प्रचारमा नलागेको अनुमान लगाउन सकिन्छ।
‘नासो’, ‘ट्रक ड्राइभर’, ‘सपना’, ‘मनकामना’, ‘मिलन’, ‘आतंकवाद’, ‘पन्छी’ लगायत फिल्ममा सँगै अभिनय गरेका अभिनेता शिव श्रेष्ठ र अभिनेत्री करिश्मा मानन्धरको सम्बन्धमा यही फिल्म ‘एउटा यस्तो प्रेम कहानी’ का कारण खटपट बढेको पनि चर्चा छ।
एक समयका चर्चित शिव र करिश्मा छोरा र छोरीसँगै पर्दामा देखिन लागेकाले फिल्मबारे धेरैको चासो थियो। यद्यपि फिल्मले दर्शकको मन तान्न सकेन। हलमा दर्शकको उपस्थिति निकै कम भएको हलवालाले पनि स्विकारे। उनीहरूले तमिल फिल्म 'मास्टर'सँग नेपाली फिल्म तुलना गर्दै ‘बरू फिल्म मास्टरले राम्रो दर्शक पाइरहेको छ’ भने। लोकेश कंगराज निर्देशित ‘मास्टर’ छोटो समयमै धेरै कमाउने फिल्ममध्ये एक बनेको छ।
फिल्म ‘एउटा यस्तो प्रेम कहानी’ दिपेश सापकोटाले निर्देशन गरेका हुन्। सिनेमा हलहरू खोल्न सरकारले आधिकारिक घोषणा गर्नुअगावै हलबाट सार्वजनिक गर्ने घोषणा शिव श्रेष्ठले गरेका थिए।
कोरोना महामारीले फिल्म उद्योग कोमामा पुगेको परिस्थितिमा नयाँ फिल्म सार्वजनिक गरेर उद्योगलाई टेवा पुर्‍याउनुअघि सरेको टोलीले बताएका थिए। तर यो अवस्थालाई निर्माण टोलीले हाइलाइटमा आएर अवसरको रूपमा लिएको देखिन्छ। यसरी टोलीले दर्शकको भावनात्मक संवेदनासँग खेलाची गरेको पनि देखिन्छ।
अर्कातिर जोखिम मोलेर नयाँ फिल्म सार्वजनिक गरेकामा फिल्मलाई हल सञ्चालकको समेत राम्रो साथ मिलेको छ। मल्टिप्लेक्स हलमा निर्माताले पहिलो हप्ता ५०, दोस्रो हप्ता ४५, तेस्रो हप्ता ४० र बाँकी रहेका हप्तामा ३५ प्रतिशत शेयर पाउने चलन छ। तर, फिल्म एउटा यस्तो प्रेम कहानीलाई भने सिंगल र मल्टिप्लेक्स हलले ५५ प्रतिशत शेयर दिने भएका छ।
करिश्माले बुधबार फेसबुकमा फिल्मको टाइटल गीत सेयर गर्दै शिव श्रेष्ठ लगायत टोलीलाई व्यङ्ग्य हानेकी छिन्। उनले लेखेकी छन्, ‘अरूलाई दोष दिएर महत्वपूर्ण बनाउन चाहनन्! तर बच्चा त राम्रो थियो।’
यसो भनेर फिल्ममा अभिनय रहेको शिवका छोरा शक्ति र आफ्नी छोरी कविताको अभिनयको प्रशंसा गरेको बुझिन्छ। सँगै निर्माण टोलीलाई भने व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा उनीहरूले फिल्मको प्रोस्ट-प्रोडक्सन काम राम्ररी नगरेको र फिल्म सार्वजनिक गरेर गल्ती गरेकै हो भन्ने बुझाउन खोजेको देखिन्छ।
फिल्ममा शक्ति र कवितासँगै शिव श्रेष्ठ, प्रियंका कार्की, आयुष्मान देशराज श्रेष्ठ जोशी, वर्षा राउत, संजोग कोइराला, बसुन्धरा भुषाल, मिथिला शर्मा लगायत कलाकारको अभिनय छ।
कोरोना महामारी कारण झन्डै ९ महिनापछि फिल्म हल खुलेका हुन्। महामारीका कारण बन्द सिनेमा हल खुलेपछिको ‘एउटा यस्तो प्रेम कहानी’ पहिलो सार्वजनिक फिल्म बन्यो।
तर पहिलो फिल्म बन्ने होडबाजीमा गुणस्तरको फिल्म दिन भने चुकेको छ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, माघ ८, २०७७, ०७:५५:००
दुई वर्षपछि शाहरूख खानले सुरू गरे नयाँ फिल्मको सुटिङ !
ऋतिकले के भनेका थिए त्यस्तो जुन सुनेर क्याटरिनालाई राम्रो लागेन
सिरियलको संवादलाई र्‍याप बनाइदिएपछि 'भाइरल'